NOMERY 22.41-23.12 F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
NOMERY 22.41-23.12 F. 2
NY TENIKO SY NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Tsy voafatotra ny tenin’Andriamanitra. Balaka mpanjakan’i Moaba dia matahotra ny zanak’Isiraely. Mitady ny hery sy toky avy amin’ny tontolo ara-panahy izy mba handreseny azy. Balama dia olona eo ambany fifehezany. Heveriny fa azony ampanaovina izay tiany rehetra, na amin’ny ara-nofo, na amin’ny ara-panahy noho ny fahefana ananany. Ny maha-olona ihany anefa no azony atao toy izany, fa Andriamanitra izay miasa ao amin’i Balama sy ny asa ampanaoviny azy dia tsy hainy sakanana na ovaina.
Mifanerasera amin’ny hafa araka an’Andriamanitra. Nataon’Andriamanitra hifanerasera amin’ny hafa ny olona. Mifametraka dindo izy amin’izany ary mifampitarika. Ireo manana fahefana, hery, mpanankarena, manam-pahaizana indraindray dia mirona ho amin’ny fampiasana ireny hifehezana, hanjakazakana, hitarihana na hanerena ny hafa hanaraka sy hanao izay tiany.
Saino : Amin’ny fifandraisanao amin’ny hafa rehetra, aiza ho aiza no lanjan’ny Tenin’Andriamanitra ? « Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona » (Asan’ny Apostoly 5.29)
Mampiasa ny olona hilaza hafatra avy aminy ho an’ny hafa ny Tompo. Tenim-pahasoavana, tenim-pitahiana, fanononana fiadanana no tian’Andriamanitra ataontsika amin’ny hafa. (1Petera 4.11). «Aoka ny fiteninareo ho amin’ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra.» (Kolosiana 4.6)
Saino : Mba manao ahoana ny firesahanao amin’ny hafa sy ny momba ny hafa?
Masina ho an’Andriamanitra. Firenena mitoka-monina sy tsy atao ho isan’ny jentilisa ny Isiraely izay midika ho masina ka tsy manao araka ny fomba amam-panao sy ny finoan’ny jentilisa. Ny kristiana koa ankehitriny dia lazain’i Jesoa fa « eo amin’izao tontolo izao fa tsy naman’izao tontolo izao » (Jaona 17.16-18)